Mahatsiaro ny olontsambatra Jean Beyzym ny Fiangonana androany. Jean Beyzym, ilay pretra misiônera Jésuite niasa teto Madagasikara. Misy fomba fiteny malagasy izay hoe : "Sakamalaho sy havozo, ka samy manana ny hanitra ho azy". I mompera Jean Beyzym dia nantsoina hoe apôstôlin'ny marary hoditra. Anisan'ny tena sarotra ny fikarakarana ireny maray hoditra ireny ka mila fandavan-tena. Dia izay volazan'ny Evanjely androany àry, no nampiharin'ity olontsambatra ity, ara-bakiteny teo amin'ny fiainany, ka azo lazaina fa naka tahaka an'i Kristy izy. Tsy mba tao aminy mihitsy ny tahotra na ny ahiahy nanoloana ny fifampikasohana tamin'ireny marary hoditra ireny. Ary araka ny tantaram-piainany, dia naniry ny ho bola tahaka ireo olona notsaboiny izy, kanefa tsy nomen'Andriamanitra azy izany.
Raha fintinina ny fiainan'ity olontsambatra ity dia toy izao manaraka izao : olon'ny finoana izy satria nanana fahatokisana an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra, indrindra tamin'ny fikarakarana ireo marary hoditra izay nataon'ny fiaraha-monina ankilabao. Olon'ny fanantenana ihany koa izy, satria nanentana ireo marary izy mba hanana fanantenana sy faharetana eo amin'ny fiainana. Ny tanjony tamin'izany dia ny tsy hahakivy ireo marary ka mety hampamoy fo azy ireo. Olon'ny fitiavana ihany koa izy, hitany tao amin'ireo marary ireo ny endrik'i Jesoa. Ny olona toa ireny, hoy izy, no tokony hanehoana fitiavana, ka natolony ho an'ireo marary ny heriny manontolo sy ny tanlenta rehetra izay nananany. Tsy mora ny mahazo ny fanjakan'ny Lanitra, hoy Ianao Andriamanitra Ray, herezo àry, izahay eto amin'ity tany fandalovana ity, hiaina marina tokoa araka izay tena sitraponao, fa ny soa atao levenam-bola ary sambatra izay mitia manompo. Olontsambatra Jean Beyzym, mivavaha ho anay. Amen.